Malunga nathi - iSinopulse Hose Factory Co., Ltd.
I-Sinopulse Hose Factory Co., Ltd. yasekwa ngo-2001, ineminyaka engaphezu kwe-15 yokuvelisa kunye namava okuvelisa. Umzi-mveliso ubekwe kwiProjekhthi yoPhuhliso lwezoQoqosho, kwisixeko saseHandan, kwiPhondo lase-Hebei, e-China, egubungela iihektare ezingama-50, ineworkshop yokuxuba irabha, umasifundisane we-mandrill othambileyo, umasifundisane onzima we-mandrill, i-workshop ye-non-mandrill, ulwakhiwo lweofisi kunye nolunye uphononongo lwezixhobo ngaphezulu kwe-20,000 yeemitha zesikwere. .
Umgangatho Wenza Umahluko
Sizinikele ekuboneleleni ngeMveliso eziMgangatho oPhezulu, i-Inshurensi ethembekileyo emva kokuthengisa kunye neModeli yokuBambisana
ISinopulse ngoyena mntu wenza umbhobho weHydraulic, umbhobho werabha oshishino kunye nokufakwa kombhobho. Ngenani lemveliso yokuqhubela phambili yocingo lombhobho wesanti, imveliso yokuqhubela phambili yentsimbi yocingo olujikeleza uxinzelelo oluphezulu lwamanzi, umbane wemveliso ephambili yombhobho oqinisiweyo. Iimveliso eziphambili zibandakanya umbhobho wamanzi, ithumbu lokucoca uxinzelelo oluphezulu, ithumbu elicinezelweyo lomoya, umbhobho wamanzi, umbhobho weoksijini, umbhobho weasetylene, umbhobho wokuwelda kabini, umbhobho weoyile, umbhobho wokutsala njl.
Ingeniso yeNtengiso YIMINYAKA eli-15 ukusukela ngonyaka ka-2001 100+, Akukho Mqeshwa u-20,000, Isikwere seMitha yeFektri, i-120,000,000 USD
Ukuveliswa kwe-SINOPULSE kwamkela iseti epheleleyo yezixhobo zovavanyo lwelabhoratri: Intambo yentsimbi / ukuvavanywa kwamandla kwento yerabha; Ukuvavanywa kokubambelela ngerabha kunye nentsimbi; Uvavanyo lokuguga ngerabha; Uvavanyo lokuphakama kovavanyo kovavanyo; Iziko loLawulo loMgangatho olungqongqo;
Sine-MSHA kunye ne-ISO Certification, ngubani onokuthi abonelele ngabona bahlobo banamava, kwaye banamava kwaye babenolwazi kwishishini ngelixa behambisa iimveliso ezinomgangatho oqinisekisiweyo kunye nokuthembeka kumaxabiso okhuphiswano.
Bonke abantu baseSinopulse bathathe inxaxheba kwezeshishini, kwaye bayakonwabela ukusebenza nayo yonke indawo yethu yeoyile, ezolimo, ezothutho, ezokwakha, ezemigodi kunye nabathengi bamahlathi. ISinopulse inenethiwekhi enkulu yabasasazi ababonelela ngeemveliso kumashishini amancinci nakwimibutho emikhulu.